ဘုံပျံနေနန်း | မြန်မာ့မဟာဂီတ
ဘုံပျံနေနန်း	February 16, 2012
Posted by myanmarclassical in ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, ရီရီသန့်, အဆိုတော် (မ).
Tags: ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, ရီရီသန့်
သီချင်းအမျိုးအစား – ဆောင်းဘွဲ့ပတ်ပျိုး
အဆို – ရီရီသန့်
အတီး – မန္တလေးဦးအုန်းမောင်
ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက် မြဝတီမင်းကြီးဦးစရေးစပ်ခဲ့တာပါ။ ဆောင်းဘွဲ့ပတ်ပျိုးကြီးပါ။ အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ ပတ်ပျိုးရှည်ကြီးတစ်ပုဒ်ပါ။ အဆိုအတီးတောင်တော်တော်နည်းသွားပြီ။ ဒီလိုပညာရှင်အဆင့် သီချင်းကြီးတွေ မပျောက်မပျက်စေဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ သဖြန်အပိုဒ်ကလေးတော့အကုန်မပါဘူး။ main အပိုဒ်ကတော့အကုန်ပါပါတယ်။
ဘုံပျံနေနန်း ပတ်ပျိုးကြီး (ဂီတ၀ိသောဓနီမူ)
ဘုံပျံနေနန်း။ ပြင်ခန်းစံမွေ့။ လျှံငွေ့နှင်းစီစီ။ ခွာပြာညိုလဲ့လန်း။ ငုံမြန်းကြဖူးတန်ချီ။ ။
ရီဝေေ၀၊ တိမ်ခြေမြလွှာ။ မှုံမှုံငွေနှင်း။ လေသွင်းစ ရာသီမှာ။ ။ တောင်တောငယ်တည့်ဘွယ်ရာ။ ဖြူပြာလေ။ မာလာလေ။ ဂန္ဓာကြိုင်သင်း။ ။
ဂမုံးအင်း။ သဇင်ပင်မြင့်မင်းနှင့်လေ။ ။
ညိုစိမ်းဝှန်။ ညာပြွန်ရေကဆင်းလို့လေး။ ။
ဟင်္သာလေသောင်တင်း။ ပိန်ညှင်းနှင့်ဇင်ရော်။ မြစ်မှာလေတခန်း။ ရွှင်လန်းကြ မြူးစံပျော်။ ဘော်ရွေပေါင်းယဉ်မောင်နှင့်မယ်။ ။
ပြာပြာရောင်လင်း။ သောင်ခင်းနုငွေလျှံဝယ်။ ။
ရှုတိုင်းငယ်တည့်လွမ်းဘွယ်။ ခါရွယ်၊ သာနယ်။ ညာဘယ်ရစ်ဝိုင်း။ ။
ပြာရိပ်မှိန်။ ဖလ်ရှိန်ညိုလဲ့မှိုင်းလို့လေ။ ရွာအံ့စွေ။ တိမ်ခြေမြနှယ်ဆိုင်းလို့လေး။ ။
အို-ရှုတိုင်းထွေလှတယ်။ ရွှေသဲဆွတ်လွတ်ဘွယ်။ ။
ညွှန်းမပြေလို့။ နေခက်အောင်ကိုသာ။ ။
နတ်ကယ်ဘယ်နယ်။ ဘန်လာရေး။ ။
ရွှေညဉ့်လွှာရုံ။ ခြုံလဲချမ်းဝန့်လေး။ ။
ထွေဝေမှိုင်ကာ။ခွေခွေယိုင်ခါ။ ယွန်းရွှေသဉ္ဇာ။ အုံးမှာဆွေး။ ။
တမ်းယောင်။ ဘယ်ဆောင်ဘယ်မှာ။ ဘုန်းမဲ့ကေသာ။ ဗွေစံရာ။ ။
သော်တာပေါ်လာ ရောင်ယှက်ဖြာကွန့်။ စကြာစုံစုံရွှေ။ ။
သီဝေမျှော်ကာဖြာယှက်ရောင်ဝှန့်။ သာလွန်ပူမြဲပန်းလှမ်းနိုင်။ ။
မှိုင်ရောင်တွေဝေ။ တမ်းလို့လွမ်းဘွယ်စေ။ ။
ဘုန်းဝေ။ တ၀မ်းနဲ။ အချမ်းသဲ။ မြပုလဲကြာရံလယ်။ တ၀မ်းနဲ။ အချမ်းသဲ။ မြပုလဲကြာရံလယ်။ ။
ဘုန်းဘုန်းရင်းနေနွယ်။ ကျွန်းကျွန်းသိမ်းမြန်း-ပိုင်။ ။
နိုင်နိုင်ငံစိုး။ ဖြိုးဖြိုးရီဝေမြိုင်။ ။
သိန်း-သန်းရောင်ဝေ။ ထောင်နေ၀င်းလျှံ။ နတ်နန်းဆယ်ခိုင်ပန်း။ ။
ရွေဝန်းခညောင်း။ ဘယ်စံလယ် မောင်မယ်မျှော်လို့။ သွေယိမ်းမြန်း။ ။
ငွေနှင်းတဖြန်းဖြန်း။ အဆန်းဆန်း။ လေညှင်းတဖြန်းဖြန်း။ ။
ဝေမြိုင်ဘွေဆိုင် ခွေယိုင်တွေမှိုင်။ သင်းသင်းကြိုင်ကြိုင်။ ကေခိုင်နွမ်းရည်။ စိမ်းလဲပီပီစိမ်း။ ။
ပြောင်းနွဲ့ခွေယောင်။ စံဆောင်လက်ျာ။ နှင်းရောမလ္လာပိန်း ။ ။
စံမြဲကြော့လမ်း။ ကြာရံယဉ်လယ်ကသာ။ သွေးနူးရှိန်။ ။
ပူမြဲ-မှန်းမတိမ်း။ ဆူသဲလွမ်းမငြိမ်း။ ။
သန်းယိမ်းလွန်လဲပျော်လို။ မှိုင်းမှိုင်းမြ။ ဝေေ၀တဲ့ညိုညို။ ။
ပျော်ဘဲပျော်လဲပျော်လို။ သက်ကယ်ဖိုဖို။ ငိုခင်းပြောင်း။ ။
မြမြမောင်းမောင်း။ ပြာအညိုရွှေ။ တိမ်ခြေငွေနှင်းပေါင်း။ ဝေစီစီ။ လေပြည်လေညှင်း။ လုံနိုင်အောင်သာ။ လောင်းပြန်တော့လှာလေလေ့။ ပြောင်းရိုက်ကယ်ဆော်ကာသာ။ ။
အုံးရွှေသဉ္ဇာ ယွန်းမော်ကြာရံလယ်။ ။
ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်။ သေများသေချင်ဘွယ်။ ဘုန်းကြွယ်ကြွယ် ဘန်ဘဲအား။ ဝေယန်လယ်။ စံပယ်မြနှယ်လေ။ ရတစေ။ နေလွန်းညား။ ပူသူများပူရော့မယ်လေလေ့။ မေ့ရက်ကယ်နေနိုင်တယ်။ ။
သဇင်ခယား စကားစမ္ပာယ်။ စမ္ဖီရွှေသွယ်။ ၀တ်မှုံပျံ့လှယ်မွှေး။ ။
လေပြေတသွေးသွေး။ စုံမြိုင်ခြေကျေးက ပန်းသာထွေ။ ။
ဆောင်ယွန်းယိုင်ဘွေ။ လေ၀န်းရစ်ခါခွေ။ ရွက်ရော်ကြွေ နွေမူးမူး။ မိန်ရာသီ-ခါမှီလသာခေါင်။ မြလွှာမှောင်တောင်ခိုးမြူး။ ရွှေဖီဖူး။ ပေါ်ရော့မယ်လေလေ့။ မေ့ရက်ကယ်နေနိုင်တယ်။ ။
ညှိုးငယ်ခွေယိမ်းမြန်း။ ပူပုံပန်းရွှေပင်လယ်။ ။
အိုကြာနှယ်ကွာရေဝေး။ မြင်လာပါဘဲဆွေး။ ။
တွေးကြံနိုင်အောင်။ ရီမှိုင်းမြောက်တောင်။ ညှင်းသာလေဆောင်။ ဖလ်ရောင်မလန်း။ ။
အာကာယံ။ တောင်တော။ သာလေနွေဘွဲ့ဆန်း။ ငှက်သံညံစီစီ။ ပင်ညီဝေ။ ရွှေဖီခိုင်ညှာလန်း။ ။
မြမြမြန်းမြန်း။ ငုံပြေပြေ။ မြိုင်လုံးလွန်းဘွယ်ထွေ။ ။
ညှာခြေ၀င်းလှလှ။ တောင်တောငယ်တခို။ ရှုတိုင်းငယ်စို။ ညိုစိမ်းမြမြ။ ။
၀ါရွှေငယ်ဆန်း။ ပင်နန်းငယ်သာထွေ။ ရော်ရွက်ကယ်ကြွေ။ နွေသွင်းစစ။ ။
ရွှေလရောင်ညီ။ ဘရဂုဏ္ဏီနှင့်။ ယှဉ်မှီထွန်းလှာ။ ပြန်တော့မယ်။ ။
စုံသာမြိုင်လယ်။ လွမ်းဘွဲ့တခန်း။ ယဉ်ပုံဝေ။ ထွေဆန်းလှလေ။ ။
ရော်မြန်းရွက်ကြင်။ ညိုလွင်လဲ့မောင်းပြေပြေ။ ။
သာသာလေညှင်းဆော်လှုံ့။ မြူးလာယှက်သန်း။ ကျံကျံရွှေငုံပန်းမှုံနံ့ကြိုင်လန်းလန်း။ ။
ဖလ်နန်းစကြာလဲ့မှိန်။ တိမ်ကတင့်ရဲ။ ဆင်လို့အနဲနဲ။ ။
ကွဲကြေကြွေ ဆွေးလှုလှုဘွယ်။ ။
တပင်ပျံလယ်။ မြေယံဝယ်။ ရွှေရင်ဘောင်လယ်။ ဖိုမမောင်မယ်။ ကျူးတယ်ခေါ်သံသားနှင့်လေ။ ။
ကိုယ်လုံးမြစေ။ သိုက်ရွှေညံ့နန်းလယ်မှာ။ ။
ပန်းလွှာရည်ရေး။ နီလာသွေး။ မြူးပျော်ကာကြွေးဘော်ညီဝေး။ လှမ်းခြေယူနှေး။ ပူဝန်လေး။ ။
ကျေးငှက်ကယ်။ ညာဘယ်တောင်နှင့်။ တောတောတောငယ်မှာ။ လွမ်းရန်သွယ်သွယ်။ ဆင့်အောင်ရင့်ရူ။ ကူးလို့တခန်း။ မြူးကြအဆန်းဆန်း။ ။
စုံသာမြိုင်နန်း။ ဝေလဲ့စီစီ။ မင်းလွင်ကချီ။ ။
နွေရာသီကြိုင်လှိုင်လန်း။ ညှင်းလေကဖြန်း။ ။
ရွှေလျှံငုံမြန်း။ ကြွေလုညှာခိုင်။ ပန်းမှုံနံ့လှိုင်တယ်လေ။ ဘုန်းပင်တိုင်ငယ်။ မြင်စမ်းပါလှဲ့အုံး။ ဘုန်းပင်တိုင်ငယ်မြင်စမ်းပါလှဲ့။ အုံးညံညံ။ ။
ညိုမြလွှာရောင်။ ရီမှိုင်းဝေဆာမှောင်။ ။
တောတောင်ငယ်သာခန်း။ ပျော်ဘွယ်ထွေပါလှတယ်။ ပြာခြေ၀ါရွှေလျှံမောင်း။ ညာကြေသာလေပြန်ညောင်း။ ရွာလှုဟန်လို။ ။ နေနန်းတိမ်ခိုခို။ ။
(သဖြန်) ။ ။ ဘာပြုမဲ့မာန်ညို။ မိုဃ်းညိုတိမ်ကြီးငယ်။ ဆီးလို့လေ။ ။
ဝေစီစီ။ ရွှေဖီညှာညွတ်ကယ် ပန်းဝတ်ကသင်း။ ။
အာကာယံ။ မြလျှံညိုလဲ့။ ဆိုင်းလို့လေ။ ။
မြိုင်ရဂုံ။ မှုံမှုံသန်ကြွင်းငယ်။ လွမ်းလေကညှင်း။ ။
1.	Aye S. Myint - February 18, 2012
အထူးမှတ်ချက်။ ။၄င်းသီချင်းကို ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် မင်းကွန်းဘုရားကြီးတည်တော်မူသောအခါ ဆိုင်းတော်များတီးရန် ရေးသားဆက်သွင်းသဖြင့် ဦးစကို အတွင်းဝန်ခန့် တော်မူသည် လို့ဆိုပြီးတွေ့ ရပါတယ်။
myanmarclassical - February 18, 2012
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂီတမေဓနီမှာလဲ အဲ့ဒီအတိုင်း ပြောပါတယ်။ ဂီတဝိသောဓနီ နဲ့ ဂီတသိပ္ပံ မှာက ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်လို့ ပြောထားပါတယ်။ မြဝတီစာစုသီချင်းစုမှာတော့ ဒီသီချင်းလုံးဝမပါဘူး။ နိူင်ငံတော်မူမှာ တော့ဘကြီးတော်လက်ထက် မြဝတီမင်းကြီးလို့ပြောထားတယ်။
2.	nandakyawthusoe - September 8, 2012
ဆရာ … ရီရီသန့် သီဆိုထားတဲ့ ပြန်ပွားစိမ်း ကိုတင်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ …